Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » New Plaque Psoriasis Unyango
I-Sun Pharma Canada Inc., i-subsidiary epheleleyo ye-Sun Pharmaceuticals Industries Limited (i-Sun Pharma) kuquka ii-subsidiaries kunye/okanye iinkampani ezinxulumanayo) ibhengeze i-PRILUMYA™ (inaliti ye-tildrakizumab), unyango lwabantu abadala abaphila ne-psoriasis ephakathi ukuya kobukhulu, ngoku iyafumaneka eKhanada.
“Siyavuya ukwazisa olu nyango lubalulekileyo lwebhayoloji kubantu baseCanada abaphila nesi sifo siqhelekileyo, sithintela kwaye sihlala singahoywa. Oku kuphehlelelwa linyathelo elibalulekileyo kwi-Sun Pharma, njengoko sandisa iphothifoliyo yethu yedermatology eCanada, ”utshilo uAbhay Gandhi, iCEO yaseMntla Melika, iSun Pharma. "Ngeminyaka emihlanu yonyango olusebenzayo lwe-plaque psoriasis ephakathi ukuya kobunzima, i-ILUMYA ibonisa ukuzibophelela kwethu ekuboneleleni amayeza amatsha ukuxhasa indlela yokuphila yesigulane kunye nokukhetha ugqirha."
I-Plaque Psoriasis sisifo esinganyangekiyo se-autoimmune esibonakala eluswini sibomvu, iindawo eziphakanyisiweyo zolusu ezigqunywe ngamaxolo amhlophe agqabhukileyo anokuqhekeka kwaye ophe. Ichaphazela abantu baseKhanada abamalunga nesigidi. I-Psoriasis ye-plaque ephakathi ukuya kwi-severe ichaphazela malunga ne-35% yezigulane. Olona celomngeni luphambili kukuba unyango oluninzi luyayeka ukusebenza ixesha elongezelelekileyo kwaye iimpawu ziyabuya. Ukuqina konyango kwixesha elide kuyimfuno engafezekanga yezigulane ezininzi.
"I-plaque psoriasis ephakathi ukuya kweyona inzima inokwenza kube nzima ukuziva ukhululekile esikhumbeni sakho kwaye ukukhangela unyango olusebenzayo kunokuba nzima njengesifo ngokwaso," watsho uGqr. kwiziko le-SKIN leDermatology ePeterborough, eOntario. "Izigulana zethu zidinga ukhetho lonyango olusebenzayo, oluzinzileyo noluqhubekayo eCanada kwaye i-ILUMYA iya kunceda ukuhlangabezana nale mfuno."
Kwiphephancwadi elishicilelweyo eliphononongwa ngabalingane bohlalutyo oluhlanganisiweyo lwezilingo ezimbini ze-RESURFACE 1 kunye ne-RESURFACE 2, idatha ibonisa ukuba izigulane ezininzi kwi-ILUMYA zigcine impendulo kunye neprofayili yokhuseleko oluqinisekisayo kwiminyaka eyi-5 yonyango.
Kwizigulane eziphathwe nge-ILUMYA 100 mg, phantse isithoba kwi-10 igcine impendulo yabo ngoNyaka we-5. I-ILUMYA 100 mg yayinyanyezelwe kakuhle ngexesha leemvavanyo zeSigaba se-3. Iimpendulo ezintathu ezimbi ezenzeka rhoqo ngaphezu kwe-placebo kunye ne-≥1% kwizilingo zeklinikhi zizifo eziphezulu zokuphefumula (i-15.1% vs. ).
ECanada, abanye abaguli ababandakanyekayo kuphononongo baye baxela ukuba basenolusu olucacileyo kwiminyaka esibhozo kamva.
“Ndinezigulane ebezinyangwa nge-ILUMYA kule minyaka isibhozo idlulileyo, kwaye ndilubonile ulusu lwazo luphucuka lwaya kutsho kumanqanaba aphezulu ococeko, kwaye luhlala lucace ixesha elide. Ngenxa yoko, ubomi babo nabo buye baphucuka,” wongezelela watsho uGqr. Gooderham.
“Ubomi bam bonke bendisilwa ne-plaque psoriasis ephakathi ukuya kobukhulu, kwaye bendisoloko ndijikeleza phakathi kwekhrimu kunye nezithambiso ezingazange zisebenze kwaye zongeza kuxinzelelo lwam. Ndide ndafunda nge-ILUMYA, ndacinga ukuba ndiphelelwe lukhetho lonyango,” utshilo u-Ainsley Leween, isigulana se-psoriasis. Ukusukela oko ndaqala ukusebenzisa i-ILUMYA kwiminyaka esibhozo eyadlulayo, i-psoriasis yam ibiphantsi kolawulo.
I-Arhente yaseCanada yeDrugs kunye neTechnologies kwiMpilo (i-CADTH), ngokuPhononongwa kweDrugs ngokuqhelekileyo, iye yancoma ngokuqinisekileyo kumaphondo ajongene nayo ukuba imveliso ye-ILUMYA ibuyiselwe kwizigulane ezine-plaque psoriasis ephakathi, xa ichazwe yi-dermatologist.